WPW सिंड्रोम भनिन्छ मा विकृति छ को स्नायु फाइबर कारण एक स्वस्थ हृदय नभएका अतिरिक्त छोटो बाटो मा एक स्नायु आवेग को excitation को खण्ड गर्न दौरा शामिल र tachycardia गराउँछ कि हृदय को मांसपेशी को।
1930 मा, चिकित्सा वैज्ञानिकहरू Wolff पार्किंसंस सेतो र पहिलो जो पछि नाम दिइएको थियो सिंड्रोम संयन्त्र, को संकेत र manifestations वर्णन गर्न पनि SVC सिंड्रोम (WPW)। त्यहाँ WPW-घटना यस्तो कुरा हो। हामी पनि यस लेखमा यो विचार गर्नुहोस्।
सामान्यतया, हृदय मा फाइबर, स्नायु प्रवाहकीय excitation नाडी वर्दी र गति को क्रमिक वितरण प्रदान गर्दछ जो एक विशिष्ट मार्ग, गठन गर्ने। संकेत पुस्ता सही Atrium मा प्वाल नोड को ए वी नोड (atrioventricular नोड) को atrioventricular क्षेत्रमा, त्यसपछि उहाँको बन्डल को खुट्टा पुग्छ मा सुरु Purkinje फाइबर excitation हृदय ventricles सबै मांसपेशी फाइबर मा प्रसारित छ, र यस्तो लामो बाटो एक समन्वित र सिंक्रोनस संकोचन प्रदान सम्पूर्ण हृदय को मांसपेशी।
को ventricles गर्न atria देखि WPW सिंड्रोम ताकत आवेग excitation को atrioventricular (ए वी) नोड बाइपास, तथाकथित बीम केन्ट एउटा छोटो बाटो विस्तार भने। त्यो excitation को लहर को हार्टबिट को सामान्य ताल भन्दा धेरै छिटो छ, छ, र किन त्यहाँ हृदय को मांसपेशी को कमी को incoordination र arrhythmia विभिन्न प्रकारका छन्।
कि भाँचिएको हृदय नाडी को तरिका हो।
हृदय को संरचना मा समान anomalies जन्मजात हो र adversely मानव भ्रूण हृदयको विकास प्रभावित कारण वंशानुगत तनाव जीन वा अन्य कारक को प्रभाव अन्तर्गत केवल गठन गर्दै हुनुहुन्छ।
भ्रूण सधैं वर्तमान थप atrioventricular घन्टी र पतली को 20-22-औं हप्तामा र पूर्ण गायब जो फाइबर। यदि यस्तो फाइबर भण्डारण छन्, anatomical अवस्था WPW सिंड्रोम छन्। को WPW-सिंड्रोम को एक वंशानुगत फारम हृदय को संरचना मा ए वी जडानहरू, दोष र anomalies को एक ठूलो संख्या द्वारा विशेषता छ। तर, केवल वयस्क जीवनको मा जन्मजात anatomical असामान्यताहरु, WPW-सिंड्रोम को पहिलो लक्षण बाबजुद उत्पन्न हुन सक्छ। सबै अवस्थामा को, को सिंड्रोम को 70% को उपस्थिति मानिसहरू मा निदान छ।
विकृति को संकेत
WPW सिंड्रोम सम्भावित उपस्थिति को सबै भन्दा साधारण लक्षण निम्न छन्:
जो बच्चाहरु कल गर्न सक्छन्, बलियो र बारम्बार छिटो धडकन महसुस "कूद या हृदय pounding।"
मुख्य रूप बाल्यकाल र किशोरावस्था मा Unexplainable syncope।
, हृदयमा दुखाइ थिचेर झुनझुनी र inhaling गर्दा दुखाइ काटन।
निसासिने काम को भावना, एक युवा उमेर मा सास को गंभीर shortness।
नवजात शिशुहरु प्रति मिनेट 200-300 Beats गर्न समय समयमा सम्भव profuse डराएको, स्थिर कमजोरी, हृदय दर खुवाउने इन्कार गर्न सक्नुहुन्छ।
रोग कसरी पहिचान गर्ने?
को हृदय मांसपेशी मा थप असामान्य फाइबर भएका मान्छे एक धेरै, को WPW सिंड्रोम प्रदर्शन गर्दा मात्र निदान छ हृदय echocardiography। निश्चित परिणाम दिन हुनेछ गूढ रहस्य।
यस्तो वाहक सिंड्रोम tachycardia वा fibrillation को bouts ग्रस्त छैन, र पनि मनमा असामान्यताहरु को उपस्थिति को अनजान हुन सक्छ।
यो asymptomatic को सिंड्रोम सबै पहिचान वाहक को 35-40% अवलोकन। WPW सिंड्रोम को हल्का प्रवाह आवर्तक अल्पकालीन tachycardia वा fibrillation चाँडै मद्दत बिना बित्दै जो विशेषता छ। मध्यम गुरुत्वाकर्षण WPW सिंड्रोम को मामला मा दौरा शामिल हटाउन antiarrhythmic लागूपदार्थ वा हृदय excitation को ब्लकरहरू केहि प्रकारको आवश्यक पर्दछ।
पर्याप्त हृदय को मांसपेशी र आलिन्द हलचल निदान सिंड्रोम र सिफारिश सर्जरी को गंभीर डिग्री को चिकित्सकीय जटिल र बेकायदा contractions हटाइएको छैन भनेर लामो समयसम्म दौरा शामिल को मामला मा।
WPW सिंड्रोम र हृदय आवृत्ति र विभिन्न नैदानिक संकेत को विशेष गरी उद्भव र निम्न प्रकार मा विभाजित छन् अनुसार वर्गीकृत छन्:
को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सधैं वर्तमान डेल्टा लहर छ, र एटीएस-tachycardia र साइनस ताल sporadically देखा गर्दा देखाउँछन्।
क्षणिकताबारे - क्षणिक बाहिरु निलय पूर्व-excitation द्वारा विशेषता छ।
लुकाइएको - प्रासंगिक AVR-tachycardia वर्णन, र बाँकी एक राज्य मा निदान छैन।
को सिंड्रोम कसरी अरू निदान गर्न सक्नुहुन्छ?
एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बिना जो अनियमित हार्टबिट को रूपमा प्रकृतिका arrhythmic अभिव्यक्ति को भाग हुनेछ, साथै, सम्भव WPW-सिंड्रोम हृदय सुनेर सम्भव छ निदान गर्न सुनिन्छ।
WPW सिंड्रोम को ईसीजी निदान साथै अल्ट्रासाउंड र echocardiography द्वारा, इलेक्ट्रोड विशेष पोर्टेबल उपकरण प्रयोग गरेर अनुगमन छन्, सबै भन्दा सही मोडेल हृदय मांसपेशी केन्ट बीम उपलब्ध दिन्छ जो विद्युत impulses को पछि डिकोड परिणाम, साथै जटिल Electrophysiological परीक्षा संग esophagus, मा उत्तेजक इलेक्ट्रोड को परिचय र हामीलाई रूढिवादी वा शल्य चिकित्सा उपचार सिफारिस गर्न अनुमति दिन्छ।
जब मा पहिचान वाहक सिंड्रोम हृदय स्वास्थ्य मा कुनै पनि उजुरी सामना गरिएको कहिल्यै 30% भन्दा WPW सिंड्रोम को उपस्थिति को लागि सर्वेक्षण। कारण ठूलो यस्तो asymptomatic को, 1980 मा, कसले WPW सिंड्रोम विशिष्ट नैदानिक तस्वीर भइरहेको र WPW-घटना विभाजित जो सिफारिसहरू प्रकाशित नम्बरमा।
यो घटना बारे, यो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय साइनस ताल मा अकाल बाहिरु निलय excitation को संकेत छ निष्कर्षमा छ, तर प्रजा कुनै रोग अमेरिका र atrioventricular tachycardia अवलोकन थिए छन्।
यो बावजुद जटिलताओं को खतरा WPW को घटना धेरै उच्च हुँदा, कुनै पनि प्रभाव प्रोभोकिंग - शारीरिक वा भावनात्मक तनाव, रक्सी, अपरिचित भौगोलिक क्षेत्र मा यात्रा - WPW सिंड्रोम को प्रतिकूल लक्षण को प्रकटीकरण हुन सक्छ। WPW-घटना को अवस्थामा को 0.3% मा वयस्क जनसंख्या घातक छ मा, जांच छन् बच्चाहरु अवस्थामा 2% मा नैदानिक मृत्यु देखाए।
छोराछोरीको तथ्याङ्क WPW घटना
WPW-सिंड्रोम बच्चाहरु मा tachycardia र arrhythmia पैदा कारक बीच एक अग्रणी स्थान ओगटेको छ। यो दिल ताल को थप अवरोध लागि स्पष्ट आधार छ, र उजुरी पनि अभाव यस्तो विकार को जोखिम कम छैन। कुनै पनि शारीरिक अधिभार, तीव्र व्यायाम, मनोवैज्ञानिक कारक को काल्पनिक खुसी हृदयको विफलता ट्रिगर गर्न सक्छन् र पनि एक हृदय आक्रमण बाट मृत्यु नेतृत्व।
निदान भएका हृदय WPW सिंड्रोम बच्चाहरु को एक ठूलो समूहको लागि लगभग 20 वर्ष को लागि दीर्घकालीन निगरानी, उमेर 18 वर्ष जन्मेका, निम्न परिणाम देखाए:
बच्चाहरु को 8% ABP-tachycardia को अचानक शुरू भएको अनुभव;
विषय 8.2% एक क्षणिक घटना संक्रमण WPW सिंड्रोम अनुभव;
भयो चेतना को क्षणिक हानि को 8.5%;
पहिलो सर्वेक्षण को समयमा बच्चाहरु को 2% पहिले नै नैदानिक मृत्यु भोगे छन्;
1.2% - मात्र केटाहरू - अचानक सर्वेक्षण अवधि मृत्यु;
WPW घटना संग बच्चाहरु को मात्र 9% संकेत डाटा लोप रिपोर्ट।
कसरी खतरनाक घटना WPW?
यी तथ्याङ्कले देखि यो WPW घटना कसरी उपस्थिति पनि असुरक्षित स्पष्ट छ। बाल्यकाल समयमा प्रतिकूल लक्षण र pathologies यस उच्च प्रतिशत अनुगमन र उमेर संग चिकित्सकीय उपायहरूको प्रणाली बिना, भौतिक र भावनात्मक तनाव बख्शते नगरी मान गर्न आधार दिन्छ र यो प्रतिशत मात्र वृद्धि हुनेछ जीवन एउटा खतरा छ।
WPW घटना संग बच्चाहरु पेशेवर खेल मा संलग्न हुँदैन, र स्थिर तनाव कारक subjected। सावधानीहरु आकस्मिक जलवायु फेरबदल वा घटनाहरू लग्नु गर्नुपर्छ, गम्भीर भावनात्मक outbursts गराउँछ। यी कारणहरूले सबै अत्यधिक गम्भीर रोग वा मृत्यु नेतृत्व संभावना हुन सक्छ। को WPW सिंड्रोम वा घटना उपस्थिति स्थापित गर्ने व्यक्ति, छैन सैन्य सेवाको लागि बोलाइन्।
को सिंड्रोम को उपचार र राहत
लक्षण र उपचार अक्सर सम्वन्धि छन्। त्यहाँ राहत कि धेरै दबाइहरु छन् हृदय आक्रमण गर्ने WPW सिंड्रोम कारण र एकदम यसको लक्षण को प्रकटीकरण कम।
ब्लकर दबाइहरु समूह हृदय को मांसपेशी को contractions फ्रिक्वेन्सी normalizes। तथापि, यस्तो साधन को प्रभावकारिता मात्र 50-60% को स्तर मा देखाइएको छ र स्थिर hypotension र अस्थमा मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Antiarrhythmics एकदम स्थिर आक्रमण AVR-tachycardia क्रप, विरामीहरु को 80% मा पत्र हृदय दर, तर पनि hypotension, हृदय आक्रमण र अन्य हृदय रोग, बाल्यकाल र किशोरावस्था को मामला मा contraindications एक नम्बर छ। केही क्याल्सियम ब्लकरहरू बिल्कुल एक स्नायु आवेग को सुधार प्रसारण को पछाडि तस्वीर रूप मा, WPW सिंड्रोम मा contraindicated, तिनीहरूले गम्भीर र अपरिवर्तनीय नतिजा छ जो atria, मा असफल छन्।
साथै, केही अवस्थामा, लागूपदार्थ ATP समूह को प्रयोग आलिन्द संकोचन मा नकारात्मक प्रभाव अवलोकन। लक्षण को राहत को गैर-दबाइ विधिहरू पनि छन्।
यो मांसपेशी ताकत impulses को सहानुभूति र parasympathetic फाइबर पास। फाइबर को पहिलो प्रकार vagus ताकत nervus vagus एक प्रकारको र पनि भनिन्छ vagal सहज क्रिया रूपमा, हृदय, तल मुटुको दर slows को दोस्रो प्रकारको क्रियाशीलता। त्यो छ, reflexes को ठीक यस प्रकारको को सक्रियता हृदयका स्थिरीकरण को प्रभाव दिनेछु। vagal impulses सक्रिय गर्न सजिलो तरिका 20-30-दोश्रो eyeballs र अक्सर मा एक कोमल स्पर्श tachycardia रोक्न मद्दत गर्छ सुनेपछि जो तथाकथित सहज क्रिया Aschner छ।
साथै, यस vagus ताकत राम्रो सास-होल्डिंग र भोल्टेज पेट मांसपेशीमा द्वारा, WPW सिंड्रोम वा उपयोगी को घटना योग र सास अभ्यास अभ्यास गर्न भनेर सक्रिय छ।
को esophagus सम्मिलित एक इलेक्ट्रोड मार्फत विधि भारी संकेत शुरू, धेरै प्रभावकारी भारी लामो समयसम्म tachycardia, तर कहिलेकाहीं हृदयको fibrillation गर्न प्रमुख, त्यसैले सुसज्जित एक Defibrillator संग विशेष मंत्रिमंडलों मा गरेको रोक्छ।
Defibrillation मात्र धेरै गम्भीर अवस्थामा, जब गंभीर खतरा जीवन मा गरिन्छ, तर यो अक्सर हृदय ऊतक मा विदेशी impulses को खतरनाक hotbeds हटाउनु र दिल ताल काम पत्र गर्न मद्दत गर्छ।
ओपरेटिव उपचार WPW सिंड्रोम र आफ्नो आवश्यकता
उन्मूलन को पत्ता घटना WPW ईसीजी परिचालन विधि मात्र असाधारण परिस्थिति, बारम्बार र लामो समयसम्म tachycardia संग, जो दबाइ संग हटाउन सकिँदैन, रूपमा साथै अचानक हृदय मृत्युको स्थापित अवस्थामा, रोगी को नातेदार वा व्यावसायिक कारण लागू गरिएको छ भने।
सर्जिकल उपचार मात्र हृदयको रोग ऊतक संरचना सबैभन्दा सही तस्वीर दिन्छ जो एउटा व्यापक र पूरा परीक्षा, को आधारमा सिफारिस गरिएको छ। त्यसैले, तपाईं घटना WPW संग सञ्चालन गर्न चाहे विचार गर्नुपर्छ।
सञ्चालन उत्पादन एक्स-रे अवलोकन द्वारा हृदय को मांसपेशी गर्न femoral धमनी मार्फत र केही क्षेत्रमा सम्मिलित छ जो radioprizhiganie वा पृथक्करण, स्नायु फाइबर विशेष इलेक्ट्रोड, प्रयोग गरिन्छ।
यो पनि रोग ताकत फाइबर kriorazrushenie गर्न सकिन्छ। र वास्तवमा, दुवै अवस्थामा सञ्चालन दक्षता 95% पुग्यो। Relapses अपूर्ण विनाश कारण foci तय गर्दै छन्, र अज्ञात संस्थाहरू अन्य तन्त्रिका Tissues को उपस्थिति मा आउँदैन। आफै गरेर, सञ्चालन स्थानीय एनेस्थेसिया, लगभग bloodless अन्तर्गत गर्न सकिन्छ, जटिलताहरू पैदा गर्दैन, धेरै छोटो रिकभरी अवधि छ र यसैले कुनै पनि उमेर मा बाहिर गर्न सकिन्छ।
मास्को मा हृदय केन्द्र
सर्जरी संस्थान। ए वी Vishnevskogo - घरेलू चिकित्सा को गर्व, उपचार र निदान को लागि आधुनिक सुविधाहरु, अनुसन्धान, विविध उच्च प्रविधी निदान र अद्वितीय हृदय शल्य आयोजित। हृदय सर्जरी को FGBU "NNP केन्द्र तिनीहरूलाई। ए एन Bakuleva हृदय सर्जरी "कार्यक्रम को, चिकित्सा, वैज्ञानिक र शैक्षिक गतिविधिहरु कार्य"। "
रूसी हृदयरोग अनुसन्धान र उत्पादन कम्प्लेक्स सर्वेक्षण र उच्च-टेक विश्व स्तर मा हृदय रोग को उपचार आयोजित। "Cardoid" केन्द्रमा तपाईं पूर्ण हृदय मूल्यांकन undergo, एक outpatient आधारमा एक गुणस्तर चिकित्सकीय उपचार प्राप्त गर्न सक्छ। मास्को मा Cardiological केन्द्र राम्रो काम गरे, त्यसैले तपाईं व्यवहार गर्न शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप लागि आवश्यकता छ भने, तपाईं संकोच गर्न सक्दैन।
थकान को Kkie लक्षण छ र यो कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न
Laryngeal papillomatosis के हो र यसको लक्षण के हुन्?
स्तन mastitis को मुख्य लक्षण
लाइसेन्स सिल्भियाले कसरी मृत्यु गरे?
केही लागि र अरूलाई राम्रो अधिग्रहण लागि जफती र सजाय रूपमा जफत सम्पत्ति को बिक्री
तार Stripper। उधेडनेवाला stripping
जापानी प्रोफेस कस्तो प्रकारको धर्म हो? जापानी द्वीपहरु को आबादी को धर्म
Mulch - के यो छ? हामी बुझ्छौं
रचनात्मक कपाल सीधा। के रोज्ने?